Idaacadda Dowladda Mise Idaacadda Qaranka? (Qoraal Cajiib Ah) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Idaacadda Dowladda Mise Idaacadda Qaranka? (Qoraal Cajiib Ah)
Dowladda Soomaaliya waxay leedahay idaacad ka kooban arag-baahiye iyo maqal-baahiye. Idaacadaahan waxay ku hadlaan afka dowladda, waxay faafiyeen wax tarkeeda iyagoo waliba buun-buuniyo, ma dhaliilaan dowladda iyo shaqada ay hayso. Sidoo kale, waxaa ka hadlo madaxda dalka si ay waxaan rabaa shacabkooda oogu soo gudbiyaan. Si kooban waa idaacad ka turjunto rabitaanka dadka xukunka hayo balse waxaa lagu magacaabaa Telefishinka Qaranka ama warbaahinta qaranka.
Maxaa ku jaban magaca?
Wax weyn ayaa ku jaban. Si aan u fahanno waxa ka qaldan waa inaan fahannaa farqiga u dhexeeyo ‘dowlad iyo qaran’. Dowlad waxaa la yiraahdaa dadka talada hayo markaas oo la isku daray. waxay ka koobantahay hay’ado kala duwan waxaana ugu sareeyo madaxweynaha. Baarlamaanku kuma jiro dowladda.
Dowladdu waa mid is badasho. mid tagto midbaa timaado. waa adiga yiraahdo dowladdi Cabdullahi yuusuf ama tii Xasan. Dadku uma dhamma, qaar waa shacab mucaarad iyo muxaafid leh. Qaar waa siyaasiyiin si adag ooga soo horjeedo dowladda markaas talada hayso. Inta muxaafidka ah waxay ku qanacsantahay sida ay dowladu wax u waddo, afkaarta ay aaminsantahay iyo wax la mid ah. Halka inta mucaaradka ah ay la qalloocantahay sida dowladdu wax u waddo iyo waliba afkaarta ay ku shaqayso, waxay jecelyihiin in iyadoo dhan la badalo si loo saxo qaladaadka ay ku jirto.
Qaranku sidaa waa ka duwan yahay. ma lahan waqti uu ku ekyahay balse waa mid waligiis jiro ciddi rabto ha maamushee. Shacabka, dowladda iyo xisbiyadda mucaaradka ahba waa wada leyihiin qaranka waxayna si siman ugu adeegaan jiritaankiisa. Qof qof ka xigo ma jiro, dhibtiisa iyo dheeftiisa dadku waa u simanyahay.
Haddi aynu niri idaacadu waxay ku hadashaa afka dowladda, dowladduna ay tahay mid aysan dadku u dhamayn sidee ku qaadan kartaa magaca qaranka? warka ay tabinayso maahan mid matalo xisbiyadda mucaaradka ah, maahan mid matalo inta badan shacabka soomaaliyeed mana matalo cid walba oo dowladda aan ku jirin sidaa darteed magaca saxda ee mudan in loogu yeero waa ‘idaacada dowladda’ lagana reebo erayga ‘Qaran’.
Haddiise lagu wado magaca idaacada qaranka waxay ka dhigan tahay inay tahay idaacadda kaliya ee qaranka u adeegto, dhammaan idaacadaha kale ee dalka ka jirana waxaa lagu asteeyay inaysan qaranka u adeegin.
Ka waran haddiba la madax baneeyo?
waxaase ka sii haboon inaysan dowladdu xattaa idaacad u gaar ah yeelan. Haddii aad u fiirsato wadamada leh idaacad u hadasho afka dowladda waxay wadaagaan maamul kaligi talis ah. Madaxda dadkooda aan hordhaafin ee ama boqortooyo ku joogo ama xoog iyo xeelad ku joogo ayaa isticmaalo idaacado ay dadka ku qulaamiyo waxa madaxdu rabto.
waddamada dimuquraadiyaddu ka jirto malahan idaacad ku hadasho afka dowladda. waxaa jiro warbaahino maqal ama muuqal ah iyo wargayso badan oo kala taageersan xisbiyada ka jiro dalalkaas. Balse taageradaas maaham mid dhaqaalo lagu siiyo ee mid ku salaysan iswaafaqid ka dhex-dhacday mabaadida ay aaminsanyihiin axsaabta iyo dadka leh warbaahinta.
Tusaale, dalka Ingiriiska waxaa kasoo baxo wargayso aad u badan. wargaysyadaas waxay u kala qaybsanyihiin taageeridda xisbiyadda ka jira dalka. The Guardian, tusaale ahaan, wargayska la yiraahdo wuxuu ka turjumaa dadka aaminsan maadida liberalism-ka sidaa darteed wuxuu taageeraa xisbiga Liberalka.
BBC-du iyadu waa idaacad u dhaxayso dhamaan dadka dagan Ingiriiska kamana turjunto xisbi ama aragti gooni ah (waa sida ay sheegato). Sababta sidaas loo yeelay ayaa ah in BBC-da qarashkeedu ay bixinyaan dhammaan dadka ku nool Ingirriska xattaaa kuwa leh idaacadaha kale; sidaa owgeed ma jirto cid gooni u sheegan karto ama xisbi ay gooni u taageeri karto.
Si kastaba ha ahaatee, dhamaan wargaysyada iyo warbaahinta kalaba hal mowqif ayay ka joogaan u shaqaynta qaranka balse waxay ku kala duwan yihiin yaa ku haboon maamulka. sidaa darteed si warbaahintu ugu sinnaato dalka waa in midda dowladda magaca laga badalaa loona bixiyaa idaacada dowladda haddii aan gabigeedaba la madax banayn karin.
Mas’uul kama Ahan Shaaciye.com qoraalkan, keliya waxaa iskaleh qofka curiyay ee qoray.